Ciidamada oo maanta Howlgal Amaanka Lagu Sugayo Dadna Lagu Soo Qabqabtay ka sameeyay B/weyne | Radio Muqdisho
Ciidamada oo maanta Howlgal Amaanka Lagu Sugayo Dadna Lagu Soo Qabqabtay ka sameeyay B/weyne
Published on June 23, 2013 by Cilmi Waare · No Comments · 1,009 views
Howlgal balaaran oo ay si wada jir ah u fulinayaan Ciidamada booliska.Nabad Sugidda,iyo Milatariga ku sugan magaalada b/weyne ayaa waxaa looga gol leeyahay xaqiijinta amaanka guud ee magaalada b/weeyne.
Howlgalladda ayaa maanta inta badan waxaa laga fuliyay hoteeladda iyo xaafadaha magaalada B/weeyne.
Taliyaha Saldhigga booliska ee magaalada b/weeyne Gashanle Dhexe Cali Dhuux Cabdi mahad alle ayaa sheegay in howlgalladan ay sii socon doonaan,isagoo sheegay in howlgalladan ay ku soo beegmayaan xili ay soo dhawyihiin loona diyaar garoobayo xuska munaasabadaha 26ka June iyo 1da Luuliyo.
Cali dhuux Cabdi Mahad alle ayaa sheegay in howlgalkan uu yimid ka dib markii ay milkiilayaasha hoteelada ugu baaqeen inay soo diiwaan galiyaan dadka degan hoteelada ku yaala magaalada b/weeyne laakiin aysan ka soo bixin baaqii loo jeediyay.
Cali Dhuux ayaa intaasi ku daray in howlgalka maanta ay soo qabqabteen dad gaaraya ilaa 200 oo qof,isagoo sheegay in la baari doono dadkaasi la soo qabtay si look ala saaro.
Howlgalladan ayaa waxa ay qeyb ka yihiin dadaallada ciidamada ku sugan magaalada b/weeyne ay gudaha magaalada uga sifeynayaan haraadiga maleeshiyaadka Al-shabaab ee doonaya inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan gobolkaasi